ယူဂိုချားဗေ့စ်၏ ၆၁ ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း - Afrikhepri Fondation
Rကမ္ဘာ့အစိုးရများ၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မင်္ဂလာပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်တဲ့သူတွေကိုဖတ်ဖို့အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။
Noam Chomsky, အမေရိကန်တွေတဦးနှင့်ကမ္ဘာ့အများဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောပညာတတ်, Noam Chomsky, ဤသည်ဤအမှုအရာတစျခုအနေဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Hegemony သို့မဟုတ် Survival: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နယ်ချဲ့မဟာဗျူဟာ။ "[Hegemony သို့မဟုတ် Survival: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နယ်ချဲ့မဟာဗျူဟာ] [ချားဗေ့စ်အထွေထွေညီလာခံ၏ရှေ့တွင်စာအုပ်နှင့်လှိုင်းတံပိုးအလွန်လှုပ်ရှား။ ] ဒီ '' ကျွန်တော်တို့ကို့နားလည်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် ယခုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်20èmeရာစုအတွင်းကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်များနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်ကျော်စိတ်ပျက်ဖွယ်။
အမေရိကန်အင်ပါယာ၏ hegemonic ဟန်လူ့မျိုးစိတ်များ၏အလွန်ရှင်သန်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီအန္တရာယ်အကြောင်းကိုသတိပေးဆက်လက်ကျနော်တို့ Damocles ၏ဓားသောဤခြိမ်းခြောက်မှု, ရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်ကလူနှင့်ကမ္ဘာမှအယူခံ။ ငါ့ကိုသငျသညျအကြံပြုပါလိမ့်မယ် [သူမြောက်မြားစွာသောစာအုပ်၏စာမျက်နှာများ, လှည့], သင်သည်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးခဏစဉ်းစားပေမယ့်အချိန်အကြောင်းပြချက်များအတွက်။
သင်သိပါကအလွယ်တကူဖတ်ပါကအလွန်ကောင်းသောစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကို, Madam နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်, ရုရှား, အာရနှင့်ဂျာမန်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ငါခြိမ်းခြောက်မှုအတိအကျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေမှာသောကြောင့်ထိုသို့ဖတ်သင့်တဲ့သူကိုပထမဦးဆုံး, United States ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေဖြစ်ကြထင်ပါတယ်။
မာရျနတျအိမ်မှာမိတ်ဆက်သည်။ မာရ်နတ်, မာရ်နတ်သည်မိမိကိုမိမိသူတို့၏အိမ်၌ရှိ၏။
ထိုအမနေ့ကမာရ်နတ်ကဒီမှာရောက်လေ၏။ ဤတွင်, မာရ်နတ်သို့ရောက်ကြ၏။ ဒီမှာ။ [သူလက်ဝါးကပ်တိုင်၏လက္ခဏာသက်သေစေသည်] ထိုသို့ယနေ့နေဆဲဆာလ်ဖာ၏အနံ့။ သူကကမ္ဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လျှင်အဖြစ်မနေ့က, မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်း, ဒီ rostrum ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတ, ငါသည်မာရ်နတ်ချေါလူကြီးလူကောင်း, ပြောနေတာကဒီမှာရောက်လေ၏။ တကယ်ပဲ။ သူကကမ္ဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လျှင်အဖြစ်။
ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတဦးသိန်းစိန်မနေ့ကကြောင့်ကျနော်တို့ကကြေညာချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့စိတ်ရောဂါမခေါ်နိုင်ထင်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်သူသည်ကမ္ဘာ၏လူမျိုး၏လွှမ်းမိုးမှုကို, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်လု ယူ. ၏လက်ရှိပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားအားမိမိ nostrums ဝေမျှဖို့ရောက်လာတယ်။
အဲဖရက် Hitchcock ကသူ့ရုပ်ရှင်ကားများထဲမှများအတွက်ဇာတ်လမ်းအဖြစ် [ကြေညာချက်] သုံးနိုငျတယျ။ ငါတောင်မှခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဆိုပြုနိုင်သည် "။ မာရျနတျရဲ့အကြော်" Chomsky ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အသေးစိတ်နည်းလမ်းတစ်ခု [မိမိစာအုပ်ထဲတွင်] ပြောပါတယ်သကဲ့သို့, အမေရိကန်အင်ပါယာကြီးစိုး၎င်း၏ system ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့သူတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပါဘူး။ ငါတို့သည်သူ့ကိုကြောင်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းကြောင်းကမ္ဘာကအာဏာရှင်စနစ်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။
အုပ်ထိန်းသူများ၏ကမ္ဘာမှအဆိုပါကြေညာချက် - အဆိုးမြင်, ခွေုံ, အရာအားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကနေဒီဧကရာဇ်လျှို့ဝှက်အပြည့်အဝ။
သူတို့ကသူတို့တစ်တွေဒီမိုကရေစီမော်ဒယ်စည်းကြပ်ချင်ပြောကြပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့၏ဒီမိုကရေစီပုံစံပဲ! ဤသူသည်ငါဆိုသညျကားမညျ့မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အထက်တန်းလွှာများ၏မော်ဒယ်နှင့်, လက်နက်နှင့်ဗုံးနှင့်အမြောက်တပ်များကချမှတ်သောအလွန်မူရင်းဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ဘာဒီမိုကရေစီ! အရစ္စတိုတယ်အသိအမှတ်ပြုရန်မပြုစေခြင်းငှါ - သို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီအမြစ်မှာနေသောအခြားသူများက။ သငျသညျမရိန်းတပ်ဖွဲ့နှင့်ဗုံးများနှင့်အတူဒီမိုကရေစီ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုစည်းကြပ်သလဲ?
မနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သမ္မတဒီမှာဒီအခန်းထဲမှာအကြှနျုပျတို့ကိုပြောသည်, ငါကိုးကား: "သင်ကြည့်ရှုရာ၌, သင်အစွန်းရောက်သင်သည်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေလွတ်မြောက်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများအားဖြင့်သင်တို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်နာလန်ထူနိုငျကွောငျးသငျသညျပြောပြစကားကိုနားထောငျ သည်ကြောက်ခြင်းနှင့်အာဇာနည်။ " သူကြည့်နေရာတိုင်းမှာသူအစွန်းရောက်မြင်သည်။ တဖန်သင်တို့ငါ့ညီ - oh, သူသည်သင်၏အသားအရေရဲ့အရောင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူကပြောပါတယ်! တစ်ဦးအစွန်းရောက်ရှိပါတယ်။ Evo Morales ကသူ့ကိုတစ်ခုအစွန်းရောက်မှဘိုလီးဗီးယား၏သတ္တိသမ္မတ။
အဆိုပါနယ်ချဲ့နေရာတိုင်းအစွန်းရောက်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့အစွန်းရောက်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနှိုးထကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကနေရာတိုင်းနှိုး။ လူတွေကလည်းတက်ရ။
ငါကိုအတက်၏ကျန်ကြောင့်ဟုဆိုကာအမေရိကန်နယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်အထိမြင့်တက်လျက်ရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်တစ်ဦးအိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သောခံစားမှု, ချစ်လှစွာသောကမ္ဘာကြီးအာဏာရှင်ဟောင်းရှိသည် တန်းတူရေး, လူမြိုးမြား၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားပါ။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အစွန်းရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးမှုကို၏မော်ဒယ်ဆန့်ကျင်ခြင်း, အင်ပါယာဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
ဒါကြောင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဆိုပါတယ် - ကဆိုပါတယ်သောသူမူကားခဲ့သည် - "။ ငါသည်ငါ့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသောသူတို့အားပြောပြရန်, အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏လူဦးရေကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုရန်လာကြပြီ"
ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ Bronx ၏လမ်းများအတွက်လမ်းလျှောက်နေလျှင်ကျွန်တော်မဆိုအမြို့မြို့၌, နယူးယောက်ဝန်းကျင်ဝါရှင်တန်, San Diego မှလမ်းလျှောက် San Antonio တွင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလူကိုမေးလျှင်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားများ, လိုလား ဒီတိုင်းပြည်? ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုခငျြသလား သူတို့ကဟုတ်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားဘူး။ အဆိုပါအမေရိကန်အစိုးရကငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားဘူး။ ဒါဟာစစ်မှတဆင့်လု ယူ. ၏, hegemony ၏ခေါင်းပုံဖြတ်၎င်း၏စနစ်, exploit ဖို့လိုသည်။
သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလား? သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အီရတ်တွင်ဖြစ်ပျက်သလဲ? အဘယ်အရာကိုလေဗနုန်တောဖြစ်ပျက်သလဲ? ပါလက်စတိုင်းခုနှစ်တွင်? အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်နေသနည်း အဘယ်အရာကိုလက်တင်အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာအတွက်ဤနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း 100 ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ ယခုမှာသူဗင်နီဇွဲလားခြိမ်းခြောက်နေသည် - ဗင်နီဇွဲလားဆန့်ကျင်သစ်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုများ, အီရန်ဆန့်ကျင်?
သူကလက်ဘနွန်လူမျိုးကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သငျသညျအများတို့သည်လည်းသူတို့ဟုသူကပြောသည်ခဲ့ဘူး, သူတို့ရဲ့အိမ်တွေနဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျည်ဆန်မှန်ထဲမှာဖမ်းမိခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုမြင်ကြပြီ။ ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤအချက်မှာအဆိုးမြင်နိုင်သနည်း sheepishly မုသာမသုံးဘာစွမ်းရည်! တစ်ဦးတိကျစွာဘောလုံးကိုနှင့်အတူဘေရွတ်အတွင်းဗုံး? ဤသည်ကျည်ဆန်မှန်ပါသလဲ လူတွေတင်ပါးဆုံရိုး unsheathe နှင့်ဆွဲခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါကျည်ဆန်မှန်ထဲမှာဖမ်းမိသောအခါသူတစ်ဦးအနောက်ပိုင်း၏ထင်၏။ ဤသည်နယ်ချဲ့, ဖက်ဆစ်, လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်။ ပါလက်စတိုင်းနှင့်လက်ဘနွန်အပေါ်ပစ်ခတ်အင်ပါယာအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး။ ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ယခုမှာအကြှနျုပျတို့သညျ "ငါတို့သည်ငါတို့၏နေအိမ်များဖျက်ဆီးခံရတွေ့မြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ခံစားနေကြရသည်။ " နားမထောင်
ကမ္ဘာ၏လူမျိုးမှ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတလူမျိုးစကားပြောမြို့သို့ရောက်လေ၏။ သငျသညျထိုသူတို့အားဟောပြောပွဲလာ - လူများ, ငါသူအာဖဂန်နစ္စတန်၏လူများကိုကိုင်တွယ်သိမြင်, လေဗနုန်ကလူ - ယနေ့နံနက်ငါအချို့သောကြေညာချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ငါသည်ငါနှင့်အတူအချို့သောစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင် အီရန်။ ထိုမင်းသည်ဤလူမျိုးကိုတိုက်ရိုက်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။
အမေရိကန်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာကမ္ဘာ့သူတို့လူမျိုးအမှာစကားသောအခါသင်သည်သူတို့ကြမ်းပြင်ပေးခဲ့ပါလျှင်ကမ္ဘာ၏ဤလူမျိုးသူ့ကိုပြောပြကြောင်း, စဉျးစားမိနိုငျသလဲ သူတို့ဘာပြောချင်ပါသလဲ
ငါတောင်ဘာလူမျိုးတစ်ဦး inkling, ထိုညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသော think ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကအိမ်ပြန်, "ကီးနယ်ချဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်! "ငါသည်သောသူတို့သည်မိုက်ခရိုဖုန်းပေးထားခဲ့ကြပါလျှင်ထိုသူတို့သည်အမေရိကန်နယ်ချဲ့ရန်တဦးတည်းအသံနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်လျှင်ဤလူပြောဘာလဲထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးရှစ်နှစ်ကျော်ပွုပါပွီအဖြစ် Madam နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, ငါ့သူငယ်ချင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကြှနျုပျတို့သညျဤတူညီသောခန်းမရန်ဒီနေရာကို လာ. , ကျနော်တို့ရှိပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့များနှင့်ကဒီမှာ ဒီအတည်ပြုခဲ့သည် - အပြည့်အဝ, အပြည့်အဝအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါသည်ဤအခန်း၌ဘယ်သူ့ကိုမှစနစ်ခုခံကာကွယ်နိုင်မစဉ်းစားကြဘူး။ ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစေ! ရဲ့ရိုးသားဖြစ်ကြပါစို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမွေးဖွားကုလသမဂ္ဂစနစ်,, ပြိုကျ။ ဒါဟာအချည်းနှီးပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့, စေသော ဒါဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အကြောင်း, မနေ့က, တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့ဖြည့်ဆည်းဖို့, ထုတ်ပြန်ချက်များကိုအောင်နှင့်တာရှည်စာရွက်စာတမ်းများအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြင်ဆင်. , (inaudible) ၏တဦးတည်းတူသောကောင်းသောမိန့်ခွန်းမှနားမထောငျကောငျး၏ Lula ။ ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ဘို့ကောင်းပါတယ်။ များစွာသောဟောပြောပွဲလည်းမရှိနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတွေအများကြီး, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကြားလျှင်, ချီလီ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့, အသင်းတော်တစ်ခုအနိုင်နိုင် deliberative ခန္ဓာကိုယ်သို့လှည့်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့သည်အကြောက်မက်ဘွယ်သောကမ္ဘာကြီးအခြေအနေအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့တန်ခိုးမရှိတန်ခိုးမရှိ။ ဗင်နီဇွဲလားတစ်ဖန်အဆိုတင်သွင်းအဘယ်ကြောင့်ထိုဖြစ်ပါသည်, ဤနေရာတွင်ယနေ့စက်တင်ဘာလ 20  ကျနော်တို့ UN-établissionsပြန်လည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Madam, ငါတို့သည်အလွန်အရေးကြီးပါဖြစ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းလေးကျိုးနွံအဆိုပြုချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျနော်တို့တာဝန်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံတမန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များယူရမယ်, ကြှနျုပျတို့ဆွေးနွေးရန်ရှိသည်။
ပထမဦးဆုံး extension ကို [လုံခြုံရေးကောင်စီ] သည်နှင့် Lula ဒီမှာမနေ့ကမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ လုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအမျိုးအစားနှင့် non-အမြဲတမ်းအမျိုးအစား, (inaudible) ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနိုင်ငံများနှစ်ဦးစလုံးအမြဲတမ်းထိုင်ခုံမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုပဋိပက္ခများ, ပွင့်လင်းဆုံးဖြတ်ချက်များဖြေရှင်းရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်ဒုတိယ, ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ။ ပွိုင့်သုံး, ချက်ချင်းဖိနှိပ်မှု - နှင့်လူတိုင်းခေါ်ဆိုကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည် - ထိုဗီတိုအာဏာအမည်ဖြင့်လူသိများ anti-ဒီမိုကရေစီယန္တရား, လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဗီတိုအာဏာ။
ငါ့ကိုသင်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဥပမာပေးပါရစေ။ လေဗနုန်တောကိုဖျက်ဆီးဖို့, အရေးမယူနှင့်တကွ, အစ္စရေးခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကျင့်ပျက်ဗီတိုအာဏာ။ ကြှနျုပျတို့အားလုံးကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ရပျလကျြအဖြစ်ဖွင့်မှီ, ကောင်စီထဲမှာတစ်ဦး resolution ကိုတားဆီးခဲ့သည်။
မနေ့ကအတွင်းရေးမှူးယေဘုယျလက်တွေ့ကျကျသူ၏နုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ထိုမင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်အမှုအရာပဲပိုမိုရှုပ်ထွေးဆည်းပူးခဲ့ကြကြောင်းအသိအမှတ်ပြု; ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ဆင်းရဲမွဲတေမှု, အကြမ်းဖက်မှု, လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပိုဆိုးလာပြီ။ ဤသည်မှာကုလသမဂ္ဂစနစ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ hegemonic ဟန်၏ပြိုကျများ၏အစွန်းရောက်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
Madam, ဗင်နီဇွဲလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်သူကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းကဒီစစ်တိုက်နှဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စကားသံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ချေးငှားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားသံကိုနိုင်ငံတကာစနစ်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်ရှာဖွေရေးကိုယ်စားပြု re-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လွတ်လပ်တဲ့အသံသည် ဖြစ်. , ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ hegemonic တပ်ဖွဲ့များကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အကျူးကျော်ရှုတ်ချရန်။
ဤသည်ဗင်နီဇွဲလားတင်ဆက်ထားပါတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Bolivar ၏ဇာတိမြေလုံခြုံရေးကောင်စီထဲမှာတစ်ဦးအမြဲတမ်းထိုင်ခုံရှာ၏။ ကြည့်ကြပါစို့ ကောင်းပြီ, အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကငျြ့ပကျြတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တစ်ဦးစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ကြိုးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံခြုံရေးကောင်စီထဲမှာတစ်ဦး post မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းမှဗင်နီဇွဲလားကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှိ၏။
အဆိုပါ imperium, သမ္မာတရားကြောက်လွတ်လပ်သောအသံများကိုကိုကြောက်သည်။ ဒါဟာအစွန်းရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပေမယ့်သူတို့အစွန်းရောက်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါငါကမဲလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ဤအမှုတို့ကိုကြေညာဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရင်တောင်ဗင်နီဇွဲလားဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုကြင်နာစွာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသမျှသောနိုင်ငံများတွင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဆိုပါ imperium တိုက်ခိုက်ခဲ့ထားပြီးကတည်းကဒါပေမယ့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, သူတို့ကနိုင်ငံအများအပြား၏ယုံကြည်မှုများကိုခိုင်ခံ့စေ။ ထိုသူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်မာစေ။ Mercosur တစ်အစုအဖွဲ့အဖြစ်၎င်း၏ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Mercosur အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကို။ ဗင်နီဇွဲလား, ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, ပါရာဂွေး, ဥရုဂွေးနှင့်အတူ Mercosur တစ်ဦးအပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
လူအမြားနဲ့အခြားလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံ CARICOM, ဘိုလီးဗီးယားဗင်နီဇွဲလားဘို့မိမိတို့ထောက်ခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်လျှောက်လုံးအာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၎င်း၏ထောက်ခံမှုကျွန်ုပ်တို့၏ကာရစ်ဘီယံညီအစ်ကိုတို့, အာဖရိကသမဂ္ဂထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အားလုံးနီးပါးကအာဖရိက၏ဗင်နီဇွဲလားနှင့်ရုရှားနှင့်တရုတ်နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်၎င်း၏ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီအပေါ်တစ်ဦးထိုင်ခုံနှင့်အတူဗင်နီဇွဲလား, မသာဖော်ပြဗင်နီဇွဲလား၏အတွေး, ဒါပေမယ့်လိမ့်မည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအမှန်တရားကိုငါတို့လူမျိုး၏ကိုယ်စား, ဗင်နီဇွဲလားကိုယ်စားနွေးနွေးထွေးထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကမ္ဘာ၏လူမျိုးအပေါင်းတို့၏စကားသံအဖြစ်နှင့်ကျနော်တို့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အမှန်တရားခုခံကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျော်နှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအထက်, Madam သမ္မတ, ကျနော်တို့အကောင်းမြင်ဖြစ်အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ တဦးတည်းခေတ်သစ်တစ်ခုထွန်းသစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်, ကျော်နှင့်စစ်ပွဲများနှင့်ဗုံးများနှင့်ရန်လိုခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်စစ်ပွဲနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလူမျိုး၏ပျက်စီးခြင်းကိုအထက်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဦးကကဗျာဆရာ "လမျးစအကောင်းမြင်" လို့ပြောလိမ့်မယ်။
ဆီလ်ဗီယို Rodriguez ကပြောပါတယ်သကဲ့သို့, ခေတ်တစ်ဦးနှလုံးမှမွေးဖွားပေးသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားထင်တဲ့သူလူငယ်များရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကား, မျှသာဆယ်စုနှစ်၏အာကာသတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသမိုင်းရဲ့အဆုံးဟာလုံးဝမှားယွင်းသောယူဆချက်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်နှင့်အတူတူပင် Pax Americana နှင့် neoliberal အရင်းရှင်ကမ္ဘာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာဒီစနစ်ကဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုထုတ်ပေးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ အဘယ်သူသည်ယခုယုံကြည်နေ?
အဘယ်အရာကိုယခုကြှနျုပျတို့ပွုပါရန်ရှိသည်ကမ္ဘာ၏အနာဂတ်ကိုသတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရုဏ်နေရာတိုင်းကိုချိုးဖောက်နေပါတယ်။ သငျသညျအာဖရိကနှင့်ဥရောပနှင့်လက်တင်အမေရိကနှင့်သမုဒ္ဒရာဒေသကနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ငါအကောင်းမြင်ရူပါရုံကိုအလေးပေးပြောကြားချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာစစ်တိုက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုတော်ကိုယျ့ကိုယျကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကအသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားကြောင်းရုန်းကန်ပူးပေါင်းမည်, ကြှနျုပျတို့ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြီးသား, စီစဉ်ထားငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဗင်နီဇွဲလားအတွက်အာဏာသိမ်းမှုအကောင်အထည်ဖော်, သူတို့သည်တခြားနေရာဗင်နီဇွဲလားနှင့်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားမှုကိုထောကျပံ့များဆက်လက်သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Michelle Bachelet ရုံခဏရှိပါတယ်ဟောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Orlando တွင် Letelier ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလုပ်ကြံခံရကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါငါတဦးတည်းအရာ add မယ်လို့: ဤရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများသည်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားသည်အသေရှိရာအခြားအဖြစ်အပျက်, အမေရိကန်တွေမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့ကလူသတ်သမားများစီအိုင်အေအကြမ်းဖက်သမားများခဲ့ကြသည်။ ငါတို့သည်ရုံသုံးရက်အတွက်အခြားနှစ်ပတ်လည်နေ့ရှိလိမ့်မည်သောဤအခန်း၌သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ သုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းအပြစ်မဲ့လူတွေကိုကွယ်လွန်သွားကြပါပြီဘယ်မှာ Cubana က de Aviacion, 73 ၏ကျူးဘားလေယာဉ်ဆန့်ကျင်ကြောင်းကြောက်မက်ဖွယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးကတည်းကလွန်ကြပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်မှာရှိလေယာဉ်တက်မှုတ်များအတွက်တာဝန်ယူတဲ့သူကဒီတိုက်ကြီးများ၏အကြီးမားဆုံးအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သနည်း သူကဗင်နီဇွဲလားအတွက်ထောင်ဒဏ်နှစ်အနည်းငယ်နေခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကစီအိုင်အေနှင့်အစိုးရအရာရှိများ [ဗင်နီဇွဲလား] ကျေးဇူးတင်သူဟာအစိုးရဖြင့်ကာကွယ်ထား, မှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြု, သူသည်ဤတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည် [အမေရိကန်] ။
ဒါပေမယ့်သူကထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ရာဇဝတ်မှုဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်အမေရိကန်အစိုးရ၏စံချိန်စံညွှန်းများ variable ကိုဂျီသြမေတြီဖြစ်ကြသည်။ ကလိုလားတဲ့အခါမှာဒါဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဤရွေ့ကား, ဗင်နီဇွဲလားအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူကြောင်းပြောသည်။ ငါတို့သည်ငြိမ်းချမ်းရေးဘို့စစ်တိုက်သောလူတဦးဖြစ်ကြသည်။
လူးဝစ် Posada Carriles ကဒီမှာကာကွယ်ထားသည်သူအကြမ်းဖက်သမား၏နာမတော်သည်။ နှင့်ဗင်နီဇွဲလားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူကိုကတခြားအလွန်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြောင့်လူလည်းကာကွယ်မှုအောက်တွင်ဤအရပ်၌နေထိုင်နေကြ: အာဏာသိမ်းစဉ်ကလူဦးလုပ်ကြံခံရကြောင်းအမျိုးမျိုးသောသံရုံးများတွင်ဗုံးကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အုပ်စု။ သူတို့ကငါ့ကိုပြန်ပေးဆွဲသူတို့ငါ့ကိုသတ်သွားခဲ့ကြသည်, သို့သော်ငါသည်ဘုရားသခင်၏ဆင်း လာ. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူများလမ်းများသို့ထွက် လာ. , စစ်တပ်ကယနေ့ငါကိုသင်တို့ရှေ့မှာကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒါတခုရှိ၏ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကျူးဘားဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ရှိခဲ့သည်, ရက်အနည်းငယ်နေဆဲရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ကျောထိုအရပ်မှအလွန်ပျော်ရွှင်လာ၏။ ထိုအရပ်၌, သင်ကခေတ်သစ်မွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ 15 များ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ထိပ်သီးတစ်ဦးသမိုင်းဝင် resolution ကိုချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ ဤသည်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါကစာမဖတ်ကြလိမ့်မည်, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ပြည်နယ်၏ 50 အကြီးအကဲများထက်ပို - သင်တို့မူကားတစ်ဦးပွင့်လင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံအောက်ပါတစ်ပွင့်လင်းထုံးစံ၌မွေးစားခဲ့ဤနေရာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံရှိသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့, ကျူးဘားတောင်ပိုင်း၏မြို့တော်ကြီးနှင့်ငါတို့သည်တစ်ဖန်ယင်းဘက်မလိုက်အုပ်စုအားအသစ်သောတွန်းအားပေးပြီ။
ငါဒီမှာငါ့ညီအစ်ကိုတို့အစ်မတွေ, ငါ၏အပေါင်းအဘော်သင်တို့ရှိသမျှကိုမေးချင်ပါတယ်တစ်ခုခုရှိလျှင်, အများကြီးက Non-ညှိပေးခဲ့သည်ဖို့ဒလပ်ြရြားမြအသစ်တွန်းအားခွင့်ပြုပါရန်သင့်စိတ်အားထက်သန်ချေးငှားချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် hegemony တားဆီးများနှင့်နယ်ချဲ့ဝါဒ၏နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတွေကာကွယ်တားဆီးဖို့, တစ်ခေတ်သစ်မှမွေးဖွားပေးပါ။
သင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီ, ဖီဒယ်ကက်စထရိုကိုနောက်သုံးနှစ်ကြာများအတွက် nonaligned ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးကျနော်တို့ထိထိရောက်ရောက်ဒီဝန်ကို run ဖို့သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ကအိုး "ထင်! ဖီဒယ်သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အသေကောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။ သူသည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်, မိမိအစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်းပြန်မယ့်သူယခု non-aligned ဥက္ကဋ္ဌမသာ။
ဒါကြောင့်, ငါ၏ချစ်လှစွာသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, Madam သမ္မတအသစ်တခုလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့, တစ်တောင်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူဤအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူဤဝေဖန်မှုများနှင့်အတူ။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အ file ကိုပိတ်ပါ။ ငါနှင့်အတူစာအုပ်ယူပါ။ နှင့်အညီ, သတိရ, ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်အလွန်နှိမ့်ချကအကြံပြုပါသည်။
ကျနော်တို့စိတ်ကူးများဟာနယ်ချဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကနေကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်, ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်။ ထိုအမျှော်လင့်ဤရာစုအတွင်းပင်ရှည်လျားလွန်းမကျွန်တော်တို့ဟာဒီခေတ်သစ်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်မြေးအဘို့ငြိမ်သက်ခြင်း၏လောကဓာတ်ကုလသမဂ္ဂ၏အခွခေံသဘောတရားမြားပျေါတှငျအခွခေံ, ဒါပေမယ့်ကုလသမဂ္ဂ-ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ ထိုအဖြစ်ကောင်းကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ပြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တခြားနေရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်; ဖြစ်ကောင်းတဲ့တောင်ပိုင်းမြို့၌တည်၏။ ကျနော်တို့ဗင်နီဇွဲလားအဆိုပြုထား။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာဝန်လေယာဉ်ပေါ်နေဖို့ခဲ့ကြောင်းကိုငါသိ၏။ လုံခြုံရေးအကြီးအကဲတစ်ဦးသော့ခတ်လေယာဉ်ထဲမှာသော့ချထားသောနေဖို့ခဲ့ရသည်။ အဲဒီနှစျခုလူကြီးလူကောင်းအဘယ်သူအားမျှကုလသမဂ္ဂ၏အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်လာရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤသည်အခြားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မာရျနတျ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်အာဏာအခြားအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆာလ်ဖာ၏အနံ့, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဖြစ်ပြီးငါသည်သင်တို့အားလုံးလက်ခံယုံကြည်ပြီး။
4 €ကနေ 15,50 အသစ်
20 € 2,98 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 15,50 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 17, 2020 6:01 pm တွင်၏အဖြစ်